Qaramada Midoobay oo ansixisey in ciidamo loo diro waqooyiga dalka Mali
Updated About:220 days ago 0
Golaha ammaanka qaramada Midoobay ayaa soo saaray qaraar u fasaxaya wadamada Afrika inay farogelin milatari ku sameeyaan dalka Mali si ay dib ugala wareegaaan kooxaha la wareegay gacan ku haynta waqooyiga dalkaas.
Qaraarkan ayaa waxaa uu ka codsaday in ururka Midowga Afrika uu ku keeno muddo 45 maalmood ah qorshe wax loogaga qabanayo dalka Mali.
Qaramada Midoobay ayaa waxaa uu illaa hadda diidan yahay in uu ansixiyo in si toos ah farogelin milatari loogu sameeyo iyadoo aan la soo hordhigin qorshe cad oo ku saabsan qaabka milatari ahaan dalka Mali loo galayo.
Kooxaha mucaaradka Tuareg iyo ururo Islaamiyiin ah ayaa qabsaday waqooyiga Mali kadib markii la afgambiyay bishii March madaxweynihii dalkaas.
Dowlada Mali iyo urur goboleedka Ecowas ayaa hore u codsaday in farogelin milatari lagu sameeyo dalkasi iyadoo ururka Ecowas uu soo bandhigey qorshe saddex kun oo askari loogu fasaxayo inuu geeyo dalka Mali.
Qaraarkan ayaa yimid toddobaad kahor kulan ay magaalada Bamako ku yeelanayaan wakiilo ka socda Ecowas,ururka midowga Afrika iyo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay.